7 Best Free Ije ije Njegharị Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Best Free Ije ije Njegharị Na Europe
E nwere ọtụtụ Akwụkwọ ntuziaka nwere ndụmọdụ na aro maka ụdị ọ bụla nke njem Europe, na ụdị onye njem ọ bụla. Akwụkwọ ntuziaka ndị a dị mma maka ịmụ banyere akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị, ma ha agaghị agwa gị gbasara ndụmọdụ ndị si na Europe. Free ije njegharị bụ a kediegwu ụzọ na-achọpụta Europe, ị ga-ahụkwa obodo na-agagharị agagharị n’obodo ọ bụla dị na Europe.
Yiri akpụkpọ ụkwụ dị mma, n'ihi na anyị na-ahapụ njem na- 7 kacha mma free ije njegharị na Europe.
1. Prague Kachasị Mma Obodo Na-eje Ije
Ntuziaka na-asụ Bekee ga-ezute gị na Abụọ ụlọ mbikọ n'obodo ochie n'ihi na 2.5 awa na-agagharị gburugburu Prague. Ga-amalite njem njegharị na ama ochie Old Town, gaa n'ihu na akara ngosi Charles Bridge. Site na etiti ndi njem nleta rue ebe kachasi nma n’obodo maka nri ehihie na mmanya, Prague si eme ma ghara ime, ị ga-emecha njem ahụ na ọtụtụ ndụmọdụ na akụkọ ị na-agaghị agụ na akwụkwọ ntuziaka.
Njem njegharị nke obodo Prague bụ otu n'ime 7 kacha mma na-eje ije njegharị na Europe, n'ihi ntuziaka pụrụ iche. Ga-ahapụ njem nleta iji chọpụta Prague, na nnukwu ndepụta nke ụlọ oriri na ọ thatụ thatụ na-enye nri nri ehihie dị ọnụ ala. Na mgbakwunye, ị ga-amụta banyere mmanya-hopping maka kacha mma Czech nka biya, na echiche kacha mma nke pụtara Prague.
Njem njegharị n'efu nke Amsterdam, makwaara dị ka FreeDam obodo na-ejegharị, bụ ihe niile gbasara ịchọpụta na ịnụ ụtọ obodo kacha emesapụ aka na Europe. Njegharị ahụ na-apụ kwa ụbọchị site na ebe nzukọ na Exchange Stock maka njem ije ije nke 3, site na akụkọ ochie Old Amsterdam na akụkọ Amsterdam nke oge a na nke ugbu a.
N'oge ndị a 3 ọchị awa, ị ga-ezute ndị njem si n'akụkụ ụwa niile wee mụta banyere amụma ọgwụ Amsterdam nke na-emesapụ aka, red ọkụ district, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na akụkọ ihe mere eme site na nduzi’ akụkọ ọchị. Na mgbakwunye, na njem nlegharị anya n'efu, nwere ike nweta Ọnọnime ndụmọdụ site na ndu na ndị kasị mma ụbọchị-njem si Amsterdam na gafere Europe.
3. Berlin Best Free na-eje ije njegharị
Berlin mbụ na-ejegharị na-ejegharị na obodo njem bụ ụzọ kasị mma na-achọpụta obodo akụkọ ihe mere eme, akara ngosi, ma pụta ìhè na di na nwunye nke awa. Ọ bụ njem mmeghe dị ukwuu na-eme njem gaa otu n'ime obodo hippest na Germany, na a ọgaranya akụkọ ihe mere, and politics.
Na mgbakwunye na akụkọ ihe mere eme, Berlin na-enye njegharị dị iche iche ga-egosi Berlin site n'akụkụ dị iche iche; nka, foodie, ma ọ bụ ihe ọ drinksụ drinksụ etiti. na Original Berlin free obodo na-eje ije njegharị, ị ga-eleta 6 nke ama ama di na Berlin, ma nụ banyere akụkọ dị n'azụ mgbidi na ọdịbendị nke Berlin.
Obodo mbụ Berlin na-ejegharị ejegharị na-aga ugboro abụọ kwa ụbọchị, si ebe nzuko na “Bud”. Onye ndu ahụ ga-echere na njem t-shirt Berlin na-ejegharị n'efu na-enwe obi ụtọ ịkwado ebe ndị ọzọ kacha mma n'obodo ahụ., na otu esi eme ya si na Berlin gaa obodo ukwu ndị ọzọ dị na Germany na nchekwa obodo.
Frankfurt na Berlin Zụọ Ahịa
Leipzig na Berlin Ahịa Ahịa
Hanover na Berlin Zụọ Ahịa
Hamburg na Berlin Ahịa Ahịa
Venice bụ otu n'ime ndị kasị nta obodo na Italy. Otú o sina dị, ọ dị mfe ịlafu mgbe ị na-agagharị na obere warawara ya na breathtaking ije. Venice na-ejegharị na obodo na-eje ije njegharị ga-eduga gị na akụkọ ihe mere eme, omenala, art, na ije na a 2.5 oge njegharị. Onye ndu mmadu obi uto ga - agwa gi ihe nile banyere obodo, nri, na ntụpọ maka ịhụnanya.
Isi ihe dị na njem nlegharị anya n'efu nke Venice bụ Simona, ndu, na obi ụtọ ikuku. N'agbanyeghị mmiri ozuzo, ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ, ị ga-enwe a fabulous oge na-enweta ibu nke nwere ikwu maka Nri Italian na Eprol na-a drinksụ ihe ọ Venụ inụ na Venice.
Treviso na Venice Zụọ Ahịa
5. Paris Best Free City na-eje ije Tour
Paris bụ otu n'ime obodo ndị njem nleta kachasị na Europe, ekwughi na uwa. Mgbe Eiffel Tower na Avenue des Champs-Elysees jupụtara na ndị njem nleta, ọ na-esiri ike ịnụ ụtọ anwansi nke saịtị akara ngosi obodo. ma, on a free na-eje ije njegharị, ntuziaka gị ga-eme ka ị nweta ihe kachasị mma nke akara ngosi ndị a, na ọtụtụ ndị ọzọ na a pụrụ iche imezi njegharị.
Paris bụ ebe obibi ọtụtụ ihe bara nnukwu uru, N'ihi ya, ọnụ ọgụgụ nke free ije njegharị adịghị agwụ agwụ. E nwere njegharị ehihie na abalị, njegharị maka agbata obi ọ bụla, nri na nka. Otú ọ dị, kacha mma free obodo na-eje ije njegharị na Paris bụ ihe zoro ezo na njem nzuzo Paris. Ntuziaka ahụ ga-eduga gị n'okporo ụzọ zoro ezo nke Louvre, ụlọ iji zoo foto foto, pụọ na igwe mmadụ ma banye n'ime obi Parisien.
6. Zurich Chocolate Free Na-eje ije City Tour
Na mgbakwunye na nnukwu ndu na ọchị, Zurich kacha mma free obodo na-ejegharị njegharị bụ culinary heaven. Ihe mere ị ga-eji gafere obodo ochie na Zurich pụta ìhè na ụdị ọdịnala, mgbe ị nwere ike ose ya na Chineke Switzerland chocolate. Ire truffles, na-amụta banyere koko mmịpụta, ma gaa na chocolatiers kacha mma na Europe ka ị masịrị Lindenhof na ụka Grossmunster.
Zurich free ije njegharị bụ 2 ogologo oge ma pụọ ​​n’ụbọchị Satọde ọ bụla site na Paradeplatz, ọ dịghịkwa mkpa ịdebanye aha.
Lugano na Zurich Zụọ Ahịa
Zọ kachasị mma iji malite ịgagharị Vienna bụ na Welcome to Vienna free obodo ije tour. Odika 2 awa ị ga - enweta obere akụkọ banyere Vienna na ama ama ya, ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ nri Viennese maka nri ehihie si Marina, otu n'ime ndị nduzi kachasị mma na Vienna.
Ugboro abụọ n'ụbọchị, onye ndu ga-echere gị na square Albertina maka njem nlegharị akụkọ gburugburu Vienna.
Ihe kachasị mma maka ịgagharị n'efu bụ ihe nduzi. Ọ bụ ezie na ọtụtụ njegharị dị na Bekee, ntuziaka ga-anapụta ihe niile ịchọrọ ịma banyere obodo ahụ na Bekee mara mma. A ga-aza ajụjụ ọ bụla ma ị ga-ejedebe ndụmọdụ ndị dị ịtụnanya na njem ahụ, akụkọ, na ozi gbasara obodo. Ihe nke abuo kacha mma bu na 7 kacha mma obodo na-eje ije njegharị na Europe, bụ na ha bụ n'efu, mkpụmkpụ na ruo n'ókè, na itinye aka.
Njegharị Na-ejegharị Na-agagharị Na Europe Na Ajụjụ
Bụ ndị a Free-ejegharị Njegharị N'ezie Free?
Free njem ije njegharị na-n'ọnụ dabeere. Ọ pụtara, ịkwesighi idebe ebe na njem maka ịkwụ ụgwọ, ma na njedebe nke njem ahụ, ị kwesịrị ịkele nnukwu ntuziaka site na ịpịpụ aka.
Ego Ole Ka M Kwuru?
Ntuziaka dịgasị iche site n'obodo ruo n'obodo, ma na nkezi n'ọnụ bụ € 5 ka € 15.
Kedu ka m ga-esi nweta Nduzi ahụ?
Free obodo na-eje ije njegharị nduzi ga-ezute gị na Central nzute ebe, ma ị ga-amata ha site na uwe elu ha. Na mgbakwunye, o yikarịrị ka ha ga-abịa gị ma kelee gị.
E nwere njem na-ejegharị n'asụsụ ndị ọzọ ewezuga Bekee?
Ọtụtụ njem njegharị n'efu na Europe na-enye njegharị na Bekee na asụsụ obodo, na njegharị ole na ole n'asụsụ ndị ọzọ. Nke a dịgasị iche site n’obodo ruo n’obodo, na ndị na-eme njem nlegharị anya.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka Akpara njem gị na nke kacha mma European obodo na-eje ije njegharị site ụgbọ okporo ígwè.
You chọrọ Embed anyị blog post “7 Best Free Walking Tours In Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-free-walking-tours-europe%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / zh-CN na / fr ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.